Goorma ayuu Matthijs de Ligt imaan doonaa magaalada Turin?Xiligee ayeyse Juventus dhameystireysaa heshiiskiisa? – Gool FM
Maxaa ku dhacay dheemankii Chelsea & Xulka Brazil ee Oscar… (Naynaastiisii layaabka lahayd iyo xog ku saabsan halka uu ku dambeeyo)
Kooxaha Chelsea iyo Arsenal oo dhibcaha ku qeybsaday kulankii adkaa ee London derby… +SAWIRRO
Manchester City oo guul dirqi ah ka soo gaartay kooxda Sheffield United… +SAWIRRO
Barcelona iyo Man United oo bar-tilmaamed ka dhiganaya saxiixa xiddig ka ciyaara horyaalka Talyaaniga
Lionel Messi oo hoggaaminaya liiska xiddigo muhiim ah ay Barcelona nasineyso kulanka Copa del Rey
RASMI: Isku aadka wadammada Africa ee Isreeb-reebka koobka adduunka oo la sameeyay
Shaxda rasmiga ah kulanka kooxaha Chelsea Iyo Arsenal ee horyaalka Premier League oo la shaaciyay
Arsenal oo qorsheyneysa inay soo qaadato xiddig ka tirsan kooxda Bayern Munich
Luis Suarez oo ku tilmaamay taageerayaasha Liverpool inay yihiin kuwa ugu fiican adduunka & sababta dhabta ah ee ka dambeysa
Zinedine Zidane oo xaqiijiyay bixitaanka mid ka mid ah xiddigaha kooxda Real Madrid
Goorma ayuu Matthijs de Ligt imaan doonaa magaalada Turin?Xiligee ayeyse Juventus dhameystireysaa heshiiskiisa?
Abdirashid Mohamud July 15, 2019
(Turin) Luulyo 2019. Daafaca da’da yar ee kooxda Ajax Matthijs de Ligt ayaa la rajeynayaa inuu maanta soo gaaro magaalada Turin, halka Bianconerri ay qorsheyneyso iney talaadada (berito) caafimaadka mariso xiddigaan, waana marka ay 65 Malyan oo Yuuro iyo gunnooyin kula heshiiso kooxdiisa.
Daafacaan ayaa heshiiska shaqsiga ah la gaaray kooxda difaacaneysa horyaalka talyaaniga isbuucyo ka hor, waxaana haray kaliya in labada kooxood ay si dhameystiran uga heshiiyaan qiimaha xiddigaan heerka caalami.
Sky Sport Italia, Tuttosport & warbaahinta kale ee talyaaniga ayaa isku raacay in Juventus iyo Ajax ay ku heshiiyeen adduun dhan 65 Malyan oo Yuuro iyo gunno lagu xiri doono bandhigga uu ka sameeyo Allianz Stadium muddada uu heshiiska kula jiro.
De Ligt ayaa isaga haray kooxda Ajax ee tababarka ku qaadaneysa Austria iyadoo bayaan lagu xaqiijiyay inuu qarka u saaran yahay inuu kooxda isaga tago.
Waxaa la aaminsan yahay inuu xiddigaan reer Holland kasoo dagi doono garoonka diyaaradaha Caselle maanta iyadoo lagu wado diyaarad khaas ah, sidaas darteed wuxuu heli doonaa fursad uu ku seexdo magaalada ka hor inta uusan berito ku marin caafimaadka J-Medical Centre.
Waxaa la rajeynayaa in De Ligt uu maro wadadii la mariyay Cristiano Ronaldo sanad ka hor, hal garoon ayaana la rajeynayaa iney kasoo dagaan, sidoo kalana uu xiddigaand da’da yar helo soo dhaweyn la mid ah xiddiga reer Portugal.
Liverpool oo ka warbixisay xaqiiqada ku aadan in Real Madrid ay dalab ka soo gudbisay Sadio Mané
VIDEO: Man City oo soo bandhigtay maaliyaddeeda saddexaad oo ay ku ciyaari doonto xilli ciyaareedka cusub ee 2019/20